Imidlalo emi-4 yasimahla evela kwiCrescent inyanga yeMidlalo ekhutshwe kulo nyaka | I-Androidsis
4 yeyona midlalo ilungileyo epapashwe yiCrescent Moon Games
Imidlalo yeNyanga yeCrescent yile Esinye sezona zitudiyo zibalaseleyo zomzuzu kwaye ipapasha izihloko ezitsha rhoqo kwiiveki ezimbalwa ezingashiyi mntu engenamdla ngenxa yomgangatho ngamnye wabo awugcinayo. Iyahambelana ne-Noodlecake Studios, i-Nitrome kunye nabanye abaninzi abagcina iGoogle Play Store kunye nemidlalo enamanqaku aliqela ngokufanayo, njengokudlala umdlalo, isitayile sobugcisa be-pixel kwiimeko ezininzi kunye nokusebenza ngokugqwesileyo ukuze ukwazi ukuzidlala nakweyiphi na Ifowuni ye-Android.
Ndiza kuhlaziya Eyona midlalo mihle ipapashiweyo yiMidlalo yeNyanga yeNyanga kwiinyanga ezidlulileyo kwaye apho sinokufumana khona okwahlukileyo, kodwa ngenxa yokuba ngoku inenkululeko, nangona yayikhutshiwe kunyaka ophelileyo. UThixo weDeer ungaphandle kolu luhlu, kodwa kufanelekile ukuba ukhunjulwe kwesi sithuba ngenxa yomgangatho omkhulu oxabisekileyo. Makhe sazi umgangatho weCrescent Moon Games oxabisekileyo kunyaka omkhulu wokudlala kwi-Android.
1 U-Elvin: Ummandla wamanzi
2 Indlela yejewel
3 Ibhomu leHammer
4 I-Deer God
U-Elvin: Ummandla wamanzi
Iplatifomu enkulu Oku kuye kwamangaliswa kukuba yenziwa sisifundo saseSpain obeka yonke into kuye, ukusizisela isihloko esonwabisayo ukudlala imidlalo elungileyo. Iphawuleka ngobugcisa be-pixel kunye nokuba nelizwe eligcwele umbala apho kuya kufuneka sitsibe kula maqonga aya konwaba bonke abadlali ababenexesha elimnandi kunye neNintendo kunye nehlabathi layo leSuper Mario.
U-Elvin: Ummandla wamanzi usele kumthombo wokuphefumlelwa onguNintendo kwaye sinokufumana ukufana okuthile kwiimo zokusingqongileyo kunye nenxalenye yomdlalo wayo. Elinye lawona manqaku anomtsalane kulo mdlalo ekufuneka siwazi amanqanaba ukuze siwadlulise. Oku kuthetha ukuba ngokuzama kunye nephutha, siya kufumana indlela yokuqhubela phambili kumdlalo. Ubhejo olukhulu oluvela kwisitudiyo saseSpain.
Elvin: Ummandla wamanzi
Umthuthukisi: Imidlalo yeCrescent yeNyanga
Enye yokubheja enkulu yeMidlalo yeNyanga yeCrescent ukusisa ngaphambili umdlalo-3 onamaxesha aphakathi Ndifuna ukwazi kwaye kufuneka sincede umlinganiswa ophambili ukuba oyise amanqanaba. Siza kufumana umlinganiswa ophambili ehlola inqanaba ukuze kufuneka sijonge olo manyano lumvumela ukuba aqhubele phambili.
Umdlalo wevidiyo icandelo lomzobo lisebenza kakuhle kakhulu Kwaye yintoni le inye ekufuneka ikunxibelelanise ngokungapheziyo. Andazi ukuba iya kuba bubugcisa be-pixel okanye ukuhamba kwamacandelo ahlukeneyo ekufuneka siwalinganise, ukusuka emahlathini, entlango okanye nasemilanjeni, kodwa iyakwazi ukutsala ngokwaneleyo ukuba iqhubeke nokuqhubela phambili kuwo onke amanqanaba. Umdlalo okhethekileyo wevidiyo apho ibard, umlinganiswa ophambili, elindele ukuba umncede kwihambo yakhe eyindumasi.
Indlela yeJewel-Umdlalo omnandi 3
Lo mdlalo wevidiyo indikhumbuza, ngokuyinxenye, ngentsomi yeWolfenstein 3D ye-1992 yezo umntu wokuqala weentolongo apho iintshaba zivela khona kwaye apho kufuneka sibe nezakhono ngokwaneleyo ukufumana ukuphuma.
Umdlalo oxhasa i-RPG kunye ukuntywila kumngxunya wobugcisa beepikseli enika useto olukhethekileyo kumdlalo ngamnye esiwudlalayo. Uyakwazi ukuqokelela izixhobo kunye nezixhobo, ukunqanda imigibe, ukubulala zonke iintlobo zeebugs kunye nokuqokelela ukutya ukuya kwinqanaba kwaye ungalahleki kwamanye amanqanaba. Iyamangalisa imeko-bume eyahlukileyo ngendlela yeentolongo ozifumanayo. Umntu wokuqala ukukhwela emhadini ekuvumela ukuba uzonwabise.
Lo Umsebenzi wobugcisa kwi-pixel art yakhululwa kunyaka ophelileyo, kodwa emva kokuphinda uthumele kwakhona Inguqulelo yasimahla, Ndiyibeke ngokucacileyo kuloluhlu lwe-4 njengenye yezona zongezo ezilungileyo yiCrescent Moon Games ukwenzela ukuba nayiphi na umdlali angakhwankqiswa yindlela yakhe ebonakalayo.
Ukuba bekunjalo ukuba uya kufunda ngendlela yokuphuhlisa imidlalo yevidiyo, uThixo weDeer unjalo uxanduva lokudlala ngaye ngenkcitho yayo esemgangathweni kwimizobo. Olona hlobo lusebenzayo lokusetyenziswa kweepikseli endikubonileyo kule minyaka idlulileyo. Kwaye ayisebenzisi le nto kuphela, kodwa ibonelela umdlalo weqonga kumaqonga kunye nebali elimangalisayo lokuntywilisela ukulibala isihlwele esibuhlungu esisikhathaza mihla le.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » 4 yeyona midlalo ilungileyo epapashwe yiCrescent Moon Games
Nika ubomi bakho ukujija ngemikhwa esempilweni enkosi kuMangaliso
I-YouTube idibanisa imenyu entsha ye-Android